अध्याय १०० | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
मद्वारा पूर्वनियुक्ति नगरिएका र नचुनिएकाहरू सबैलाई म घृणा गर्छु। त्यसकारण मैले ती मानिसहरूलाई मेरो घरबाट एक-एक गरी निकालेर मेरो मन्दिरलाई पवित्र र निष्खोट, मेरो घरलाई सधैँ नयाँ र कहिल्यै पुरानो नहुने तुल्याउनुपर्छ, मेरो पवित्र नामलाई सदासर्वदा फैलन सक्‍ने, र मेरा पवित्र जनहरूलाई मेरा प्रिय मानिसहरू बन्‍न सक्‍ने तुल्याउनुपर्छ। यस प्रकारको राज्य नै मेरो लक्ष्य र मेरो वासस्थान हो; मैले सबै थोक सृष्टि गर्नुको आधार यही हो। कसैले पनि यसलाई प्रभाव पार्न वा परिवर्तन गर्न सक्दैन। यसभित्र म र मेरा प्रियहरू पुत्रहरू मात्रै एकसाथ जिइरहेका हुनेछौं, र यसलाई पैतालामुनि कुल्‍चने अनुमति कसैलाई पनि हुनेछैन, यसलाई ओगट्ने अनुमति कसैले पनि हुनेछैन, र कुनै पनि अप्रिय घटना घट्न दिने कुरा त परै जाओस्। सबै कुरा प्रशंसा र हर्षोल्‍लासमय हुनेछ, र सबै कुरा मानिसले कल्‍पना गर्न नसक्‍ने दृश्‍य हुनेछ। तिमीहरूले तिमीहरूका सारा हृदय र मनले, अनि तिमीहरूको क्षमताले भ्याउने गरी तिमीहरूको सारा शक्ति मलाई अर्पण गर भन्‍ने मात्रै म चाहन्छु। आज होस् या भोली, तिमीहरू मलाई सेवा दिने व्यक्ति भए पनि वा आशिषहरू प्राप्त गर्ने व्यक्ति भए पनि, तिमीहरूले मेरो राज्यको लागि आफ्‍नो सारा शक्ति खर्च गर्नुपर्छ। यो सृष्टि गरिएका सारा मानिसहरूले लिनुपर्ने दायित्व हो, र यसलाई यसरी नै गरिनुपर्छ र कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। मेरो राज्यको सुन्दरता सदा नयाँ बनाउनको लागि, र मेरो घरलाई मैत्रीपूर्ण र एकीकृत तुल्याउनको लागि सेवा प्रदान गर्न म सबै कुरालाई परिचालन गर्नेछु। कसैलाई पनि मेरो अवज्ञा गर्ने अनुमति छैन, र त्यसो गर्ने जो-कोहीले न्याय भोग्‍नैपर्छ र श्रापित हुनैपर्छ। अब मेरो श्रापहरू सबै राष्ट्रहरू र सबै मानिसहरूमाथि आइपर्न थालेका छन्, र मेरा श्रापहरू मेरो न्यायभन्दा पनि गम्भीर छन्। अब सबै मानिसहरूलाई दोषारोपण गर्न सुरु गर्ने समय हो, ताकि यसलाई सराप मानियोस्। किनभने यो अन्तिम युग हो, र सृष्टिको समय होइन। युगहरू परिवर्तन भएको हुनाले, अहिले मेरो कामको गति अत्यन्तै फरक छ। मेरो कामका खाँचोहरूको कारण, मलाई चाहिने मानिसहरू पनि फरक नै छन्; त्यागिनुपर्ने मानिसहरूलाई त्यागिनेछ; हटाइनुपर्ने मानिसहरूलाई हटाइनेछ; मारिनुपर्ने मानिसहरूलाई मारिनेछ, र रहन दिनुपर्ने मानिसहरूलाई रहन दिइनेछ। यो मानिसको इच्‍छाबाट मुक्त अपरिहार्य प्रवाह हो, र कुनै मानिसले यसलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन। यसलाई मेरो इच्‍छाअनुसार नै गरिनुपर्छ! मैले त्याग्‍न चाहेकाहरूलाई म त्याग्छु, र मैले हटाउन चाहेकाहरूलाई म हटाउँछु; कसैले पनि मनोमानी ढङ्गले काम गर्नेछैन। मैले रहन दिन चाहेकाहरूलाई म रहन दिन्छु र मैले प्रेम गर्न चाहेकाहरूलाई म प्रेम गर्छु; यो मेरो इच्‍छाअनुसार नै गरिनुपर्छ! म भावनाहरूअनुरूप काम गर्दिनँ; मेरो लागि त धार्मिकता, न्याय र क्रोध मात्रै हुन्छन्, कुनै भावना हुँदैन। ममा मानवको सानो छाप पनि छैन, किनभने म परमेश्‍वर स्‍वयम्‌ हुँ, परमेश्‍वरको व्यक्तित्व हुँ। किनभने सबै मानिसहरूले मेरो मानवताको पक्षलाई मात्रै देख्छन्, र तिनीहरूले मेरो ईश्‍वरीयताको पक्षलाई देखेका छैनन्। साँच्‍चै नै, तिनीहरू अन्धा र भ्रमित छन्!
म तिमीहरूलाई जे भन्छु त्यसलाई तिमीहरूले आफ्‍नो हृदयमा सुरक्षित राख्‍नुपर्छ, तिमीहरूले मेरा वचनहरूद्वारा मेरो हृदयलाई बुझ्नुपर्छ र मेरो बोझतिर ध्यान दिनुपर्छ। त्यसपछि, तिमीहरूले मेरो सर्वशक्तिमान्‌तालाई जान्‍नेछौ र मेरो व्यक्तित्वलाई देख्‍नेछौ। किनभने मेरा वचनहरू बुद्धिका वचन हुन्, र मेरा वचनहरू पछाडिका सिद्धान्तहरू वा नियमहरूलाई कसैले पनि बुझ्‍न सक्दैनन्। मानिसहरूले म छल र कुटिलपनको अभ्यास गर्छु भन्‍ने ठान्छन् र तिनीहरूले मेरा वचनहरूबाट मलाई चिन्दैनन्, तर यसको विपरीत, तिनीहरूले मेरो विरुद्धमा ईश्‍वर-निन्दा गर्छन्। तिनीहरू अत्यन्तै अन्धा र अज्ञानी छन्! तिनीहरूमा अलिकति पनि भेदशक्ति छैन। मैले बोल्‍ने प्रत्येक वाक्यमा अख्तियार र न्याय हुन्छ, र मेरा वचनहरू कसैले पनि परिवर्तन गर्न सक्दैन। मेरा वचनहरूलाई जारी गरिएपछि, काम-कुराहरू मेरा वचनहरू अनुसार सम्पन्न हुने निश्चित हुन्छ; मेरो स्वभाव यही हो। मेरा वचनहरू अख्तियार हुन् र जसले ती संशोधन गर्छ त्यसले मेरो सजाय निम्त्याउँछ, र मैले तिनीहरूलाई प्रहार गर्नैपर्छ। गम्भीर मामिलाहरूमा तिनीहरूले आफ्नो जीवनमा विनाश ल्याउँछन् र तिनीहरू पातालमा, वा अतल कुण्डमा जान्छन्। मैले मानव जातिलाई निराकरण गर्ने एक मात्र तरिका यही हो, र मानिससँग यसलाई परिवर्तन गर्ने कुनै उपाय छैन—यो मेरो प्रशासनिक आदेश हो। यो याद राख! कसैलाई पनि मेरो आदेश उल्लङ्घन गर्ने अनुमति छैन; कामहरू मेरो इच्छाअनुसार नै गरिनुपर्छ! विगतमा, मैले तिमीहरूप्रति सहज व्यवहार गरेको थिएँ र तिमीहरूले मेरा वचनहरूको मात्र सामना गऱ्यौ। मैले मानिसहरूलाई प्रहार गरेर ढाल्ने सम्बन्धमा बोलेका वचनहरू अझै पूरा भएका छैनन्। तर मेरो इच्छाअनुसार नचल्नेहरूलाई दण्ड दिन आजदेखि उसो सबै विपत्तिहरू (यी मेरो प्रशासनिक आदेशहरूको सम्बन्धमा हुन्) एकपछि अर्को गर्दै आउनेछन्। तथ्यहरूको आगमन हुनुपर्दछ—अन्यथा मानिसहरूले मेरो क्रोध देख्न सक्नेथिएनन्, तर आफैलाई बारम्बार भ्रष्ट पार्नेथिए। यो मेरो व्यवस्थापन योजनाको एउटा चरण हो, र मैले मेरो कामको अर्को चरण गर्ने तरिका यही हो। म तिमीहरूलाई अग्रिम रूपमा यो भन्छु, यसैले कि तिमीहरू अपराधहरू गर्नबाट र अनन्त विनाश भोग्नबाट बच्न सक। भन्नुको अर्थ, आजको दिनदेखि, म मेरा ज्येष्ठ पुत्रहरूबाहेक सबै मानिसहरूलाई मेरो इच्छाअनुसार तिनीहरूका उचित स्थान लिन लगाउनेछु, र म एकपछि अर्को गर्दै तिनीहरूलाई सजाय दिनेछु। म तीमध्ये एउटालाई पनि उम्कन दिनेछैनँ। तिमीहरूले फेरि भ्रष्ट हुने आँट मात्र गरेर त हेर! तिमीहरूले फेरि विद्रोही हुने मात्र आँट गरेर त हेर! मैले म सबैका निम्ति धर्मी छु, ममा रत्तीभर पनि भावुकता छैन भनेर मैले पहिले नै भनेको छु र यसले मेरो स्वभावलाई उल्‍लङ्घन गर्नु हुँदैन भन्ने देखाउँछ। मेरो व्यक्तित्व यही हो। यसलाई कसैले पनि परिवर्तन गर्न सक्दैन। सबै मानिसहरूले मेरा वचनहरू सुन्छन् र सबै मानिसहरूले मेरो महिमित अनुहार देख्छन्। सबै मानिसहरूले पूर्ण रूपमा र ठोस रूपमा मेरो आज्ञापालन गर्नुपर्छ—मेरो प्रशासनिक आदेश यही हो। ब्रह्माण्डभरिका र पृथ्वीको पल्‍लो छेउका सबै मानिसहरूले मेरो प्रशंसा र महिमा गर्नुपर्छ, किनकि म अद्वितीय परमेश्‍वर स्वयम्‌ हुँ, किनकि म परमेश्‍वरको व्यक्तित्व हुँ। कसैले पनि मेरा वचनहरू र वाणीहरू, मेरो बोलीवचन र चाल-चलनहरू परिवर्तन गर्न सक्दैन, किनकि यी मेरो मात्र विषयहरू हुन्, र यी ती कुराहरू हुन् जुन मैले प्राचीनकालदेखि धारण गरेको छु र जुन अनन्तसम्म रहिरहन्छ।
मानिसहरू मलाई जाँच्‍ने अभिप्राय बोकेर हिँड्छन्, र तिनीहरूले मेरा वचनहरूभित्र त्यस्तो कुनै कुरा भेट्टाउन चाहन्छन्, जसलाई तिनीहरूले मेरो निन्दा गर्न मेरो विरुद्धमा प्रयोग गर्न सकून्। के तँद्वारा म निन्‍दित हुनुपर्छ? के मलाई लापरवाही रूपमा आलोचना गरिनुपर्छ? के मेरा काम-कुराको बारेमा लापरवाही रूपमा छलफल गरिनुपर्छ? तिमीहरू साँच्‍चै नै आफ्‍नो लागि जुन कुरा असल छ त्यो नगर्ने झुण्ड हौं! तिमीहरूले मलाई चिनेकै छैनौ! सियोन पर्वत के हो? मेरो वासस्थान के हो? कनानको असल भूमि भनेको के हो? सृष्टिको आधार के हो? किन विगत केही दिनदेखि मैले यी वचनहरू बारम्‍बार उल्‍लेख गरिरहेको छु? सियोन पर्वत, मेरो वासस्थान, कनानको असल भूमि, सृष्टिको आधार—यी सबै मेरो व्यक्तित्वको सन्दर्भमा उल्‍लेख गरिएका छन् (शरीरको सन्दर्भमा)। सबै मानिसहरूले यी भौतिक रूपमा अस्तित्वमा रहेका स्थानहरू हुन् भन्‍ने ठान्छन्। मेरो व्यक्तित्व सियोन पर्वत हो; यो मेरो वासस्थान हो। जो-जो आत्मिक संसारमा प्रवेश गर्छन् तिनीहरू सियोन पर्वतमा उक्लनेछन् र मेरो वासस्थानमा प्रवेश गर्नेछन्। मैले सबै कुरा मेरो व्यक्तित्वमा सृष्टि गरें; अर्थात्, सबै थोक शरीरभित्र सृष्टि गरिएका थिए, त्यसकारण आधार यही हो। तिमीहरू मसँगै शरीरमा एकसाथ फर्कनेछौ भनेर म किन भन्छु? यसको मूल अर्थ यसैमा छ। “परमेश्‍वर” भन्‍ने पदवी नामजस्तै, यी नामपदहरूको आफैमा कुनै अर्थ छैन, बरु ती मैले फरक-फरक स्थानलाई दिने फरक-फरक नाम हुन्। त्यसकारण तिनको ठेड अर्थहरूमा त्यति धेरै ध्यान नदेओ, तर मेरा वचनहरू सुन्‍ने कार्यमा मात्रै ध्यान देओ। तिमीहरूले तिनलाई यसरी हेर्नुपर्छ, त्यसपछि तिमीहरूले मेरो इच्‍छा बुझ्‍न सक्‍नेछौ। म तिमीहरूलाई किन मेरा वचनहरूमा बुद्धि छ भनेर बारम्‍बार स्मरण गराउँछु? तिमीहरूमध्ये कति जनाले यस पछाडिको अर्थलाई पत्ता लगाउने प्रयास गरेका छौ? तिमीहरू सबै अन्धाधुन्ध विश्‍लेषण गरिरहेका छौ र अव्यवहारिक बनिरहेका छौ!
विगतमा मैले बताएका धेरैजसो कुराहरूलाई तिमीहरूले अझै पनि बुझ्दैनौ। तिमीहरू शङ्‍काको स्थितिमा रहन्छौ र मेरो हृदयलाई सन्तुष्ट पार्न सक्दैनौ। तिमीहरू जुन बेला मैले बोलेका हरेक वाक्यप्रति निश्‍चित बन्‍न सक्छौ, तिमीहरूको जीवन परिपक्‍व हुने समय त्यही हुनेछ। मेरो लागि, एक दिन हजार वर्ष जस्तो हो र हजार वर्ष एक दिन जस्तो हो; मैले उल्‍लेख गर्ने समयको बारेमा तिमीहरूले कसरी विचार गर्छौ? तिमीहरूले यसलाई कसरी व्याख्या गर्छौ? तिमीहरूले यसलाई गलत रूपमा अर्थ लगाउँछौ! यसको साथै, मेरो विरुद्धमा प्रयोग गर्न केही भेट्टाउन सकिन्छ कि भनेर धेरैजसो मानिसहरू मसँग यसको बारेमा तर्क-वितर्क गर्छन्—तिमीहरूको लागि के असल हो सो तिमीहरूलाई थाहा छैन! होशियार बस्, नत्र म तँलाई प्रहार गर्नेछु! जब सबै कुरालाई स्पष्ट पार्ने दिन आउँछ, तब तिमीहरूले सबै कुरा पूर्ण रूपमा बुझ्‍नेछौ। म तिमीहरूलाई अझै अहिले केही भन्दिनँ (अहिले मानिसहरूलाई खुलासा गर्ने समय हो; मेरो इच्‍छा पूरा गर्नको लागि हरेक व्यक्ति होसियार र सतर्क हुनुपर्छ)। म मेरा वचनहरूद्वारा सबै मानिसहरूलाई खुलासा गर्नेछु, र तिनीहरू साँचो हुन् कि होइनन् भन्‍ने कुरालाई देखाउन तिनीहरूको मूल रूपलाई प्रकट गरिनेछन्। यदि कुनै व्यक्ति वेश्या वा ईजेबेल हो भने, मैले तिनीहरूलाई खुलासा गर्नैपर्छ। मैले पहिले नै भनिसकेको छु, कि म औँलो नउठाई काम-कुरा गर्छु, र मानिसहरूलाई खुलासा गर्नको लागि म मेरा वचनहरू मात्र प्रयोग गर्छु। म भेषदेखि डराउँदिन; मेरा वचनहरू उच्‍चारण भएपछि, तैँले तेरो मूल रूपलाई प्रकट गर्नैपर्छ, र तैँले आफूलाई जसरी भेष बदले पनि म यस कुरालाई अवश्य नै छर्लङ्गै देख्‍न सक्छु। मेरा कार्यहरूको सिद्धान्त यही हो—वाणीहरूको मात्र प्रयोग गर्ने र कुनै पनि शक्तिको प्रयोग नगर्ने। मेरा वचनहरू पूरा हुनेछन् कि हुनेछैनन् भन्‍ने विषयमा मानिसहरू अत्यन्तै बेचैन बन्छन्, र तिनीहरू मेरो खातिर व्याकुल बन्छन् र मेरो लागि चिन्ता गर्छन्, तर यी प्रयासहरूको वास्तवमा आवश्यकता छैन; ती तिर्नु नपर्ने मूल्य हुन्। तँ मेरो विषयमा चिन्ता गर्छस्, तर के तेरो आफ्‍नै जीवन परिपक्‍व भएको छ? तेरो आफ्‍नै गन्तव्य कस्तो छ? बारम्‍बार आफैलाई प्रश्‍न गर् र लापरवाही नबन्। मानिसहरू सबैले मेरो कार्यलाई ध्यान दिनुपर्छ—मेरा कार्यहरू र मेरा वचनहरूद्वारा—मेरो व्यक्तित्वलाई देख्‍नुपर्छ, मेरो बारेमा अझै बढी ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्छ, मेरो सर्वशक्तिमान्‌तालाई जान्‍नुपर्छ, मेरो बुद्धिलाई जान्‍नुपर्छ र मैले जुन माध्यम र विधिहरूद्वारा सबै थोकको सृष्टि गरेँ तिनलाई जान्‍नुपर्छ, यसरी मलाई अटुट प्रशंसा चढाउनुपर्छ। म कसमाथि मेरा प्रशासनिक आदेशहरूको हात बढाउँछु, मैले कसमाथि काम गर्छु, म के गर्न चाहन्छु र म के पूरा गर्न चाहन्छु त्यो कुरा म सबै मानिसहरूलाई देखाउनेछु। यो हरेक व्यक्तिले हासिल गर्नुपर्ने कुरा हो, किनभने मेरो प्रशासनिक आदेश यही हो। म जे भन्छु त्यो म पूरा गर्नेछु। कसैले पनि लापरवाही तरिकाले मेरा वचनहरूको विश्‍लेषण गर्नु हुँदैन; सबैले मेरा वचनहरूद्वारा मेरा कामहरू पछाडि रहेका सिद्धान्तहरूलाई देख्‍नुपर्छ, र मेरा वचनहरूद्वारा मेरो क्रोध के हो, मेरो श्राप के हो र मेरो न्याय के हो सो देख्‍नुपर्छ। यी सबै कुराहरू मेरा वचनहरूमा निर्भर हुन्छन् र मेरा हरेक वचनहरूभित्र हरेक व्यक्तिले देख्‍नुपर्ने कुराहरू हुन्।
अघिल्लो: अध्याय ९९
अर्को: अध्याय १०१